Sekota: Otu esi Egbuo na Gbochie mkpesa Google Analytics Spam
Maka azụmahịa dị nta, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịbanye na akaụntụ Google Analytics na ịhụ ọtụtụ ụzọ na-abata. Ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na ebe nrụọrụ weebụ gị na-enweta echiche dịgasị iche ma ghara ịnata nyocha nke ma nke a okporo ụzọ bụ ezigbo ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike mgbasaozi mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ na emebeghị SEO n'ụzọ kwesịrị ekwesị, mgbe ahụ, ọ nwere ohere na ị ghọọ onye nchịkọta mkpesa gbasara Google Analytics. Nyochaa nke ọma ma ọ bụrụ na ị mepụtara backlinks n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ị nweghị backlinks ma ka na-enweta nza nke echiche, mgbe ahụ okporo ụzọ gị niile bụ ụgha na ndị na-abụghị ndị ziri ezi - software advanced.
Lisa Mitchell, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , maara otú e si alụ ọgụ spam ma na-ekerịta ihe ụfọdụ dị mkpa.
Spam Google Analytics abụghị ihe ọ na-eme mgbe ọ na-abịa ịzụ ahịa maka ndụ. Bots nwere ike inyere gị aka ịkwanye saịtị gị, ma ị nweghị ike inweta ahịa ma ọ bụ ego site n'aka AdSense. Ọzọkwa, ị nwere ike ghara irite uru site na nsuso nsuso nke Google ka ị na-ata ahụhụ site na spam nyocha. Nke a nwere ike ịmepụta mmetụta dị oke mkpa na data ị ghọtara, gbochie ọnọdụ na usoro nke saịtị gị, wee nweta pasent percent nke ọnụ ọgụgụ. Bots nchịkọta nchịkọta nwere ike ime na nnukwu ọnụọgụ nke anaghị ekwe omume maka obere ụlọ ọrụ..Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị natala ọtụtụ ihe na echiche dị n'izu a, ọ dịghịkwa SEO ọ bụla, mgbe ahụ ị na - emeri nsogbu a, ọ ga - ewepụkwa ya ozugbo o kwere omume.
Ntugharị sprating spam
Ụfọdụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ spam na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịhụ ha, kachasị mma- seo -offer, 100dollars-seo, na ndị yiri ya. Ọ dị mfe ịhụ ha n'ihi na URL ha dị na ịntanetị. Ịzụta SEO ọrụ site na ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi bụ naanị nhọrọ maka nlanarị gị na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị nwere akara dijitalụ, rịọ ya ka ọ hụ spam na-ezigara ma kpochapụ ya ozugbo o kwere mee. Ebe nrụọrụ weebụ na-eche na ọ bụ ihe ziri ezi, ị nwere ike ịchọta ha site na ntanetị na ozi adịgboroja. Ọ bụrụ na mmadụ na-akwa gị site na ozi ịntanetị, na-arịọ gị ka ị pịa njikọ njikọ ha, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahapụ onwe gị n'ebe ha nọ. N'ụzọ dị mwute, spam nchịkọta bụ ihe dị iche na ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ịhụ karịa ntinye akwụkwọ ntanye. Mgbe ọ bụla ị hụrụ akara aka site na freemoneyonline ma ọ bụ weebụsaịtị ndị yiri ya, ọ ka mma imechie windo windo ma kpuchie cache gị.
Ịkwụsị spam referral
Ozugbo ịchọtara spam na-ezigara, nzọụkwụ ọzọ bụ igbochi ha ịkọ akụkọ gbasara Google Analytics. Ihe nzacha bụ ụzọ dị mfe iji kwụsị ha. Ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ nzacha dị ka o kwere mee iji gbochie nleta spam site na ederede na Google Analytics. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịnweta echiche na-enweghị atụ nke na-ekwe ka saịtị gị nweta nanị okporo ụzọ ziri ezi. Nyocha nyocha, n'aka nke ọzọ, bụ otu ederede akọwaghị ebe ị nwere ohere iji tinye ihe nzacha dị iche na nchịkọta gị maka ule. Ikpeazụ ma ọ bụghị nke kachasị, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ nhọrọ nnapụta nke nyochaa nzacha gị ma rụọ ọrụ na-akpaghị aka iji rụọ ọrụ gị.